This page isatranslated version of the page How to contribute and the translation is 98% complete.
သင်သည် ဆော့ဖ်ဝဲလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် open source အသိုင်းအဝိုင်း ကို နှစ်သက်ပါသလား။ မီုီယာဝီကီ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ဝီကီပီးဒီးယား သို့မဟုတ် အခြား ဝီကီမီဒီယာ ဝဘ်ဆိုက်များကို သင်နှစ်သက်ပါသလား?
ထို့နောက် ဤနေရာတွင် သင်၏အရည်အချင်းများကို ပံ့ပိုးပြီး အခြားပံ့ပိုးကူညီသူများထံမှ သင်ယူပါ။ သင်ပါဝင်နိုင်သည့် နယ်ပယ်များ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို ပေးခြင်းဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် သင့်အား စတင်ရန် ကူညီပေးပါမည်
ဝဘ် API များ
ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်အားလုံး၏ အကြောင်းအရာများကို အခမဲ့လိုင်စင်များအောက်တွင် ထုတ်ဝေထားသည်။ ဤကြီးမားသော အခမဲ့အသိပညာအစုကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်၊ ပေါင်းစပ်ပြီး တိုးပွားစေရန်အတွက် ကုဒ်ရေးပါ။ သင်ခန်းစာကို လိုက်နာပါ၊ MediaWiki wiki များအားလုံးတွင် ရနိုင်သော API နှင့် စတင်ရန်၊ အကြောင်းအရာနှင့် Wikidata အတွက် အခြား API များ။ XML နှင့် SQL အမှိုက်ပုံများ အပါအဝင် အခြားသော ဒေတာအရင်းအမြစ် ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုဒ်သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ၊ ဖာထေးမှုတစ်ခု ပေးကာ လုပ်ဆောင်စရာတစ်ခုကို ပြင်ပါ။
အကြောင်းအရာကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် Toolforge|Toolforgeတွင် သင်၏ကိရိယာများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးရန် botsကို ဖန်တီးပါ။ မိုဘိုင်းအက်ပ်များ သို့မဟုတ် ဒက်စ်တော့အက်ပ်လီကေးရှင်းများတွင် ဟက်ခ်လုပ်ပါ။ သို့မဟုတ် Site Reliability Engineering ကို server configuration ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပါ။
PHPUnit testing၊ Selenium မှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက်ဘရောက်ဆာစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Continuous Integration မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်များ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ သင်၏ပထမ bug ကို သတင်းပို့ပါ သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား bug အစီရင်ခံစာများ ဖြင့် ကူညီပါ။
Tech ambassador တစ်ဦးအနေဖြင့်၊ အခြား Wikimedians များကိုကူညီပါ နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူ၊ relay Tech News သည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည့်အရာများအကြောင်း အသုံးပြုသူများအား အသိပေးရန်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများနှင့် သင့်ဒေသခံဝီကီအကြား ပေါင်းကူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သံတမန်အဖွဲ့ နှင့် mailing list။
အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာများသည် MediaWiki စာရွက်စာတမ်း၊ အခြား မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာ နှင့် ဤဝဘ်ဆိုက်၏ မည်သည့်စာမျက်နှာကိုမဆို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် အင်္ဂလိပ်မှလွဲ၍ အခြားဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်ပါက ဤဝဘ်ဆိုက်ကိုဘာသာပြန်ခြင်း နှင့် MediaWiki software တို့ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
support desk သို့မဟုတ် MediaWiki communication နှင့် social media ချန်နယ်များတွင် အဖြေများရှာဖွေနေသော သုံးစွဲသူများနှင့် developer များအား ကူညီပေးပါ။
UX အကြံပြုချက်ကို ရှာဖွေနေသည့် ပရောဂျက်များတွင် Wikimedia ဒီဇိုင်းမူများ ကို အသုံးပြုရာတွင် ကူညီပေးပါ။
အခြားအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် နှင့် တွေ့ဆုံပါ။
MediaWiki နှင့် Wikimedia နည်းပညာများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ
Wikimedia အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် contact သို့ သင်ဝင်ရောက်နိုင်သော နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆက်သွယ်ရေး အတွက် IRC (Internet Relay Chat) တွင် #wikimedia-dev connect ကို အသုံးပြုပါ။
Wikimedia software အကြောင်း ဆွေးနွေးရန်အတွက် email lists များစွာလည်း ရှိပါသည်။ စာရင်းအပြည့်အစုံ ကို ရနိုင်ပါပြီ။
သင်၏ social network တစ်လျှောက် Wikimedia သတင်းများကို လိုက်ကြည့်နိုင်ပြီး မျှဝေနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗန်းစကားမပါဘဲ သင်၏အသုံးပြုသူပြောဆိုချက်စာမျက်နှာရှိ အပတ်စဉ် အကျဉ်းချုပ်ကို လက်ခံရရှိရန် * သင်သည် Tech News ကို စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
MediaWiki တွင် တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း
အရင်က MediaWiki မသုံးဖူးရင်-
သင့်အသုံးပြုသူအကောင့်ကို mediawiki.org တွင် မှတ်ပုံတင်ပါ။
တည်းဖြတ်နည်း ဝီကီစာမျက်နှာများကို VisualEditor သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်း။
သင်၏ အများသူငှာ အသုံးပြုသူ စာမျက်နှာ ကို တည်းဖြတ်ရန် အားမနာပါ။ သင့်ကိုယ်သင် မိတ်ဆက်ပါ။ သင်သည် အသုံးပြုသူ အချက်အလက် နမူနာ ကို သုံးနိုင်သည်။ Wikipedia လမ်းညွှန်ချက်များ ကို ဖတ်ရှု
အကူအညီ:လမ်းညွှန်ပြသခြင်း ကို စစ်ဆေးပါ။
သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွင် စာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏ အကြောင်းအရာကို သင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဆွေးနွေးမှုစာမျက်နှာများတွင် အများသူငှာ မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုကို ထည့်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Help:Talk pages တွင် ပိုမိုလေ့လာပါ။
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=How_to_contribute/my&oldid=5278797"